उत्पादन लागत ४० प्रतिशत बढेको छ | गृहपृष्ठ
Home अभियान परिशिष्ट (सप्लिमेन्ट) उत्पादन लागत ४० प्रतिशत बढेको छ
on: ४ जेष्ठ २०७५, शुक्रबार १०:२५ अभियान परिशिष्ट (सप्लिमेन्ट)
अशोककुमार वैद सञ्चालक नेपाल शालिमार सिमेण्ट प्रालि
भारतीय रेलवेले नेपालका सिमेण्ट उद्योगहरूबाट व्यापारमात्र लियो । तर, त्यसका लागि आवश्यकीय पूर्वाधार विकासमा चासो राखेन । रक्सौलमा प्रदूषण नियन्त्रणको जिम्मेवारी भारतीय रेलवेको हो । भाडा र जरीवानाको नाममा अर्बौं रुपैयाँ लिएर भारतीय रेलवेले आवश्यकीय पूर्वाधार निर्माणमा चासो नराख्नुको परिणाम बारा र पर्साका सिमेण्ट उद्योगले भोगिरहेका छन् ।
रक्सौलमा प्रदूषणको विषय उठेपछि भारतकै रामगवामा अनलोड स्थल बनाउने योजना पनि विविध कारणले अघि बढ्न सकेन । यसमा त्यहाँको राजनीति र माफियातन्त्रको परोक्ष भूमिका पनि देखियो । अन्यत्र अनलोड गर्दा त्यहाँसमेत अवरोध गर्न खोजियो । रक्सौलमा अनलोड बन्द भएपछि विकल्पको व्यवस्थापनमा नेपाल सरकारसमेत उदासीन देखिनु बुझिनसक्नु भएको छ । नेपालले जग्गामात्र उपलब्ध गराइदिने हो भने भारतीय पक्ष त्यहाँसम्म रेलवे विस्तारका लागि सकारात्मक देखिएको छ । तर, नेपाल सरकारले वास्ता गरेको छैन । नारायणपुर अनन्तमा आयातकर्ता अहिले पनि जरीवाना तिर्न बाध्य भएका छन् ।
केही दिनअघि मैले एक ¥याक सिमेण्टमा करीब १ करोड भारतीय रुपियाँ जरीवाना बुझाएको छु । त्यसबेला होलीको राष्ट्रिय बिदामा कामदार नपाउँदा त्यसको मार आयातकर्ताले भोग्नुपरेको थियो । हाम्रा विभागीय मन्त्रालयसमेत यसको निकासमा सकारात्मक देखिएनन् । अहिले यहाँका उद्योगको सिमेण्ट उत्पादनमा ४० प्रतिशतसम्म लागत बढेको छ । लागत बढेको कारण भाउ बढाउन बाध्य भएका उद्योगमा अनुगमन हुन्छ । तर, सरकारी अनुदानमा चलेका हेटौंडा र उदयपुर सिमेण्टले भाउ बढाउँदा सरकार किन केही बोल्दैन ? सरकारले क्लिङ्करमा आत्मनिर्भर हुने भनेको त छ, त्यसका लागि सडक, बिजुलीलगायत पूर्वाधार खोइ ? कुरामात्र गरेर हुँदैन । बारा र पर्साका एक दर्जनभन्दा बढी सिमेण्ट उद्योगको भविष्य जोगाउने हो भने तत्कालका लागि नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग अनुरोध गरी रक्सौलमा अनलोडिङ खुलाएर एउटा निश्चित समयसीमाभित्र औद्योगिक कोरिडोर आसपासमै स्थान छनोट गरेर अनलोडको स्थान निर्माण गरिनुपर्दछ ।